Lenovo ThinkPad E14 Silver (i5-10th Gen) (20RAS0AT00)-10 ~ ICT.com.mm
HomeLenovo ThinkPad E14 Silver (i5-10th Gen) (20RAS0AT00)-10
Lenovo ThinkPad E14 Silver (i5-10th Gen) (20RAS0AT00)-10
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Display : 14″” Fulll HD IPS CPU: Intel CORE i5-10210U 1.6Ghz 4C MB Memory: 8GB DDR4 2666Mhz RAM SODIMM Storage SSD: 512GB SSD M.2 2280 NVME Graphics: INTEGRATED_GRAPHICS WLAN:... [Learn more]
Brand: LenovoSKU: 153574N/ASee more: Computer Systems, Laptops / Notebooks, Lenovo, Products, Recent UpdatesFilter by: Laptops (PC), USD
Display : 14″” Fulll HD IPS
CPU: Intel CORE i5-10210U 1.6Ghz 4C MB
Memory: 8GB DDR4 2666Mhz RAM SODIMM
Storage SSD: 512GB SSD M.2 2280 NVME
WLAN: INTEL AX201 2X2AX+BT WW
Log In: FINGERPRINT READER
Camera: 720P HD CAMERA W/MIC
BACKLIT: BACKLIT Keyboard
Battery: 3CELL 45WH INTERNAL
Adapter: 65W USB-C PCC 3PIN
လျင်မြန်သွက်လက်တဲ့ Performance နဲ့ တစ်ကိုယ်ရည်သုံး အကြမ်းခံ Laptop ကောင်းကောင်းလေးတစ်လုံးကို ရှာနေတယ်ဆိုရင် ဒီ Lenovo (i5-10 th Gen) Laptop လေးက စဉ်းစားသင့်တဲ့ Laptop တွေထဲက တစ်လုံးဖြစ်ပါတယ်။ မျက်နှာပြင်အရွယ်အစား 14” နဲ့ ကျစ်ကျစ်လျစ်လျစ်ထုတ်လုပ်ပေးထားပြီး ဘေးဘောင်ပါးလွှာတဲ့ ဒီဇိုင်းဖြစ်တာကြောင့် ပိုမိုကြည့်ကောင်းတဲ့ ဒီဇိုင်းနဲ့အသုံးပြုနိုင်မှာပါ။ Resolution က Full HD ဖြစ်ပြီး IPS နည်းပညာပါဝင်တဲ့အတွက်ရုပ်ထွက်ကြည်လင်ရုံသာမက အရောင်အသွေးကလည်း စိုပြည်လှပပါတယ်။ CPU အတွက် Intel CORE I5-10210U 1.6Ghz 4C MB ကို တပ်ဆင်ထားပြီး 2666MHz DDR4 RAM 8GB ကိုတပ်ဆင်ထားတာကြောင့် လုပ်ငန်းသုံးဆော့ဖ်ဝဲအမြင့်တွေကို သွက်သွက်လက်လက်နဲ့ Run ပေးနိုင်ပါတယ်။ Memory Storage မှာ သာမန် HDD နဲ့ PCle SSD ထက် ပိုမိုမြန်ဆန်တဲ့ NVME M.2 2280 SSD (512GB) ကိုအသုံးပြုထားတာကြောင့် Laptop ရဲ့ Windows နဲ့ Software အဖွင့်အပိတ်၊ဒေတာကူးပြောင်းမှုက လုံးဝမြန်ဆန်သွက်လက်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဂရပ်ဖစ်လိုအပ်ချက်အတွက်ကိုတော့ Integrated Graphic ကို ထည့်သွင်းထားပါတယ်။ အလွယ်တကူ Login လုပ်နိုင်ဖို့ လုံခြုံရေးမြင့်မားတဲ့ Finger Print Reader လည်း ပါဝင်ပါတယ်။ Web ကင်မရာအတွက် 720P HD ကင်မရာကို တပ်ဆင်ပေးထားတဲ့အတွက် Work From Home ပရော်ဖက်ရှင်နယ်တွေနဲ့ Online Education ကျောင်းသားတွေ အကြိုက်တွေ့မှာပါ။ ကီးဘုတ်ကမီးလင်းတဲ့ Backlit ကီးဘုတ်အမျိုးအစား ဖြစ်ပါတယ်။ ဘတ္ထရီအတွက် 3Cell 45Whr ဘတ္ထရီကိုတပ်ဆင်ထားပါတယ်။ Charging Adapter အဖြစ် 65W USB-C PCC 3PIN Adapter ကိုအသုံးပြုထားတဲ့အတွက် အားဝင်မြန်ဆန်မှာပါ။ အာမခံတစ်နှစ်ပေးထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။
Lenovo ThinkPad E14-IML T
Relentless innovation, Flexibility to the max
The way we compute. The way we do business. The way we live our lives. Every time business has gone somewhere new, discovered something different, or done something revolutionary, chances are, ThinkPad was there. We stem fromalong tradition of firsts.You’re not tethered to your desk, so it’s great to haveaPC that doesn’t act like it. Our Yoga 2-in-1 laptops go where you go, work the way you want, and deliver heavyweight performance inalightweight chassis. The 360-degree hinge accommodates the way you work.